Kismaayo News » Marxaladihii dib u heshiisiinta Soomaaliya iyo Dadaaladii Beesha Caalamka, Qeybtii 2 WQ Bishar Haji
Marxaladihii dib u heshiisiinta Soomaaliya iyo Dadaaladii Beesha Caalamka, Qeybtii 2 WQ Bishar Haji
Sidaan la wada socono Dowlada Turkiga aya sanadihii ugu dambeeyay ku soo birtay dowladaha deeqaha bixiya “deeq’bixiyayaasha”. Turkiga waxay gacan furan oo u fidisay dalka Soomaaliya oo ah dal marti geliyay abaaro iyo colaado is biirsaday muddo ka badan 20 sano.
Bishii Agoosto 19. 2011-ka waxa magaalada Muqdisho soo booqday Raiisul wazaaraha dalka Turkiga Rajab Tayib Erdogan, booqashadan oo aheyd mid taariikhi ah islamarkaana ah tii ugu horeysay ee uu mas’uul sare oo caalami ah ku yimaado dalka soomaaliya aya si diiran looga soo dhaweeyay dal iyo dibad, soomaalida aya Erdogan ku tilmaamay inuu yahay saaxiibka keliya ee muslimka ah ee ay soomaalidu leedahay.
Erdogan aya balanqaaday in dowladda iyo shacabka Turkiga soomaalida la garab istaagi doonaa hill iyo hoo, iyaga oo ka caawin doona dhan walba oo nolosha ah, taasoo qeyb ka ah dadaalada beesha caalamka.
Wixii maalinkaa ka dambeeyay Turkiya waxay guda gashay fulinta ballamadii ay horay u qaaday, talaabadii ugu horeysay waxay magac’owday safiirkii ugu horeeyay muddo ka badan 20labaatan sano, islawaqtigaas safiirka cusub ee Turkiga aya soo gudbiyay waraaqihii oqoonsiga safirnimo, taas oo muujineysay niyad wanaaga iyo sida Turkiya uga go’antahay fulinta siyaasadihiisa saaxibtinimo ee ku aadan dalka Soomaaliya..
Dowlada Turkiga waxay Muqdisho ka furtay xafiis horumarineed oo saldhig u noqday howlgallada 13 Hayadod oo Turki ah oo isugu jira shibil iyo qaar xukuumada hoos taga.Raiisu wazaare Erdogan aya Muqdisho kaga dhawaaqay in marka dowlada laga yimaado deeqaha shacabka turkiga oo keliya kor u dhaafayaan 250 malyuun oo doolarka Mareykanka ah..Dhinaca kale diyaaradaha Turkiga aya bilabay safarro nidaamsan oo ah Caalamka-Muqdisho-Muqdisho-Caalamka.
Turkiga aya deeqo waxbarasho siiyay arday soomaaliyeed oo ka badan 1000kun arday oo loo qaaday dalka Turkiga, kuwaasoo helay takhasusaad kala gedisan, deeqahan waxbarsho oo ay maamushay Dowladda Soomaaliya looma qeybinin si cadaalad ah.Sidoo kale Dowlada Turkiga ayaa soomaaliya ugu deeqday Iskuulo iyo madaaris oo dowladda Soomaaliyeed oo qaanuun ahaan ka wakiil ah shacabka soomaaliyeed ku koobtay magaalada Muqdisho.
Hayadaa Bishacas ee dalka Turkiga aya sidoo kale howlo bani ‘aadannimo ka billowday Muqdisho, iyada oo kaashaneysa Dowlada Soomaaliya.
Waxa ka faaideytay kumanaan Soomaaliyeed oo reer Muqdisho ah iyo qaxotiga ka yimid gobolada ee ku sugan xeryaha qaxootiga ee Muqdisho. Waxa intaa dheer inay dhistay Cisbitaalo iyo goobo deg’deg ah oo la sheegay inay ka faaideysanayaan tiro ka badan 3saddex melyuun oo soomaliyed oo ku dhaqan Muqdisho iyo deegaanada ku xeeran.
Turkiga aya horay dowladda soomaaliya oo qaanuuniyan ka wakiil ah shacabka soomaaliyeed u balan qaaday fulinta mashaariic waaweyn oo kala gedisan (projects in vital sectors) sida Caafimaadka,waxbarashada, dhisidda wadooyinka, Airporada iyo meelaha qashinka lagu qubo, sidoo kale dhisidda iyo qalabeynta Ciidamada xooga dalka. Dhamaan mashaariicdan waxay isgu jiraan qaar fulay, qaar lagu guda jiro iyo qaar wadada ku soo jira, lakiin nasiib darro raja lagama qabo inay soo dhaafaan caasimadda Soomaaliya oo noqotay 3saddex geeska barmuudo.
Warbixinta aan hayo waxaa ka mid ah in kun iyo shan boqol (1500) oo ceelal iyo berkado isugu jira laga hirgeliyay caasimadda iyo hareereheeda,iyada oo la isticmaalayo Matooro iyo Mashiina waaweyn oo laga keenay dalka Turkiga, taas waxay sahashay in dad ka badan hal malyan (1 000 000) helaan biyo nadiif ah, waxa hoos u dhacay khatarta xanuunada ka dhasha biyaha wasakheysan.
Dhinaca militiriga, Waxay kala saxiixdeen labada dowladood heshiis dhigaya in Soomaliya la siiyo qalab ciidan iyo tababarro wada socda iyo weliba arimo la xiriira teknoolajiyadda iyo isticmaalka hubka casriga ah, sidoo kale kor u qaadidda tayada Askeriga Soomaaliyeed. Heshiiskan waxa qalinka ku duugay barlamanka dalka Turkiga.
Intaa waxaa dheer dowladda Iiraan oo iyana malaayiin doolar ugu deeqday dalka soomaaliya, iyo weliba dalalka iyo hayadaha rigliga ah ee reer galbeedka ee an marnaba ka daalin taakulada soomaaliya dhinac kasta. Nasiib darro Dolwladda Soomaliya ilaa iyo imika kuma guuleysanin inay wax u dhigma kun (1000) doolar oo gar’gaar ah gaarsiiso qaar badan oo ka mid ah Gobolada dalka.
Tani waa qeyb yar oo ka mid ah deeqaha dowlada iyo Shacabka Turkiga ku caawiyeen dalka soomaaliya ee sida khaldan loo maamulay, sidoo kale waxay qeyb ka tahay dadaalada beesha caalamka ugu jirto dib u soo nooleynta qaranimadii Soomaaliya, Laakiin sida muuqata soomaalida uma diyaarsana hanashada qaran cadaalad ah oo dadka isu keena. La soco qeybta xigta haduu Alle idmo
Bishar Haji B.HAJI114@HOTMAIL.COM